सम्भव भएसम्म कोरोना संक्रमितको उपचारको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ : स्वास्थ्य प्रमुख | चितवन पोष्ट दैनिक
चितवनमा कोरोना संक्रमित दैनिक दुईसयको हाराहारीमा बढ्दै गएको छ। यही अवस्थामा संक्रमितको दर बढ्दै जाने हो भने अवस्था झनै जटिल बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा जिल्लाको पूर्वतयारी कस्तो छ त? यही विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकप्रसाद तिवारीसँग गरिएको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
१) होम आइसोलेसनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी गरिरहनु भएको छ?
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै स्थानीय तहले निगरानी गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको कुरा हो। त्यसैले होम आइसोलेसनमा बसेका सबै संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको जिम्मा स्थानीय तहकै हो। र, हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सम्बन्धित स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यति भन्दै गर्दा स्वास्थ्य कार्यालय पन्छिने भन्ने पनि होइन, हामीले आवश्यक पर्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहसँग सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो।
२) होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित अस्पताल ल्याउँदा–ल्याउँदै बाटैमा मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने?
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको अवस्था हेरेर अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आउनुपर्छ। संक्रमित भएपछि लुकाएर बस्ने होइन, अवस्था जटिल हो भने समयमै अस्पताल ल्याउनुपर्छ। कम्तीमा आफ्नो स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा या नजिकको स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श त लिन सकिन्छ नि। अस्पताल भर्ना भइसकेको बिरामीको हकमा भने अस्पताल नै जिम्मेवार बन्नुर्छ। त्यसैले यो समयमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै जिम्मेवार बनेर हुँदैन, संक्रमित र आम नागरिक सबैले सहयोगी भूमिका निभाउनु जरूरी छ।
३) कति बिरामी त अस्पतालमा प्रवेश नपाएरै मृत्युवरण गर्न पुगेका घटना पनि चितवनमै सुनिन्छ नि?
केही दिनअघि बाहिरबाट आएका बिरामीले अस्पतालमा प्रवेश नै नपाएको घटना चितवनकै हो। त्यसमा मिस अन्डस्ट्यान्डिङ भएकै हो। तर, कमजोरी कहाँनेर रह्यो भन्दा सबै अस्पतालमा बिरामी चाप बढिरहेका बेला कुन जिल्लाबाट र कुन अस्पतालले पठाएको हो, त्यो बुझेर सम्बन्धित अस्पतालसँग समन्वय गरेर बिरामी पठाएको भए यो समस्या हुने थिएन। त्यसैले अहिले हामीले यहाँको अस्पतालको वस्तुस्थिति हेरेर बुझेर मात्रै बिरामी पठाउन छिमेकी जिल्लाहरुलाई भनिरहेका छौँ।
४) काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेरै कोरोना संक्रमितलाई चितवन ल्याएको कुराले पनि तरंग पैदा गरेको छ नि?
योचाहिँ एकदमै जटिल विषय हो। किनकि यहीँका बिरामीले बेड नपाउँदै गर्दा पैसा भएका व्यक्तिले ठूलै लगानी गरेर उपचार गर्न यहाँ ल्याउने कुराले जिल्लावासीमा एक खालको डर पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तर, यहाँको भरतपुर अस्पताल र दुईवटा मेडिकल कलेज संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यी अस्पतालहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि देशैभरका बिरामीलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले बाहिरबाट आएका कुनै प्रकारका बिरामी नल्याउ भन्न मिल्दैन। तर, हामीले सम्भव भएका उपचार सम्बन्धित जिल्लाकै अस्पतालले गर्ने र त्यसबाहेकका उपचारको लागि मात्रै यहाँ पठाउन भनेका छौँ।
५) चितवनमा कुन कुन अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ?
भरतपुर अस्पताल र दुईवटा मेडिकल कलेज संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा स्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्झौता गर्ने भनेको २५ देखि २०० बेडसम्मका अस्पतालमात्रै हुन्। तर, हालसम्म कुनै पनि निजी अस्पतालसँग हाम्रो सम्झौता भएको छैन। आवश्यक परेमा यहाँका निजी अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा रहन हामीले भनेका छौँ। तर, सबै निजी अस्पतालमा आइसियूसहितको सेवा नहुने हुँदा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न सहज छैन।
६) सरकारीबाहेकका अस्पतालहरुमा शुल्कचाहिँ कस्तो छ?
सरकारले अनुमति दिएको अस्पताल तोकेको बेडमा सरकारीसरह निःशुल्क उपचार हुन्छ। त्यसको खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ। तर, बिरामीको चाप बढी भएकोले कतिपय अस्पतालले आफ्नो तरिकाले बेड बढाएर पनि सेवा दिइरहेका छन्। तर, साना अस्पतालहरुसँग हालसम्म सम्झौता भइसकेको छैन। र, अर्को कुरा यतिखेर शुल्कको भन्दा पनि सेवाको महत्त्व बढी हो।
७) अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमित अक्सिजनको सहारामा छन्। अहिलेको अवस्थामा चितवनमा कति अक्सिजन खपत भएको छ भन्ने आँकडा छ ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चितवनमा ठूला अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट चलाएका छन् भने केही निजी कम्पनीबाट पनि उत्पादन भइरहेको हुँदा अक्सिजनको अभाव छैन। तत्काललाई उद्योग तथा कलकारखाना पनि बन्द भएकोले अस्पतालहरुमा मागअनुसारको आपूर्ति भइरहेको छ। तर, सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी माग भएकोले अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर खरिदका कामहरु पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन्। त्यसैले यसमा समस्या होला जस्तो लाग्दैन। तर, कति अक्सिजन माग र खपत भएको छ भन्ने आँकडा हामीसँग छैन। किनकि आफ्नै प्लान्ट भएका अस्पतालले कतिपय बिरामीलाई प्लान्टबाट सीधै बिरामीको बेडमा अक्सिजन जोडेर पनि काम गरिरहेका छन् नि त।